Writers International Network Zimbabwe: 01/08/10 - 01/09/10
Too fat to hunt
Too lazy to sweat
Like pompous little gods,
Presiding over their own 'creations'
On the apex of blood-soaked power,
Stolen from the people,
Comfortably they sit
On taxpayers they prey,
The taxpayer whose money,
The stench of blood and power,
Give off strongly,
The impoverished ordinary man,
Whose hard-earned dollar,
Oils their obscene life of luxury.
P. Chidavaenzi, August 21, 2010.
Posted by Pastor Phil at 19:32 0 comments Links to this post
Posted by Beaven Tapureta at 18:02 0 comments Links to this post
kuchikoro nedzangu tsvaratsvata
pamwe ndomhemhaira nepata pata
pita pata pita pata kuda dzidzo
asika ticha havako, chafambirwa dho-o
ticha vakachata nemari
vave kuida kukunda Mwari
kavo kambo ndi incentive
or else vanove inactive
kuchikoro nemari half
ndinowana ticha vari tough
kuti vagofara chose
vangu baba vazvimba musoro
yavo mhuri wave mutoro
kubasa vanotambira ya kondo misodzi
uko bepa remitero yemadhora kuuso dzi-i
dai kudenga pari pedo ndaiinda
ndanonamatira pana Mwari senda
dzidzo zvave zviroto
chokwadi ndiri mumoto
Na Hwande Patrick , Gokwe (Nembudziya)
Posted by Beaven Tapureta at 15:03 0 comments Links to this post
Posted by Beaven Tapureta at 18:47 0 comments Links to this post
Na Phillip Chidavaenzi
Ko ini ndini ndadii?
Ko, unondirwadzisirei zvakadai?
Hausi iwe here wakauya kwandiri,
Ukati unotambanudza ruoko kwandiri,
Ndashaya mari yechikoro?
Kuna mai vangu ndiwe wakaenda,
Ukati hatingadyi nhoko dzezvironda iwe uripo –
Musi uya wakandibata mukaka,
Zuro ukandibata magaro,
Ini ndikazviti mwii
Ko handiti taidya kubva muruoko rwako?
Asi kunanzva hakuna kukugudza
Asi inyota rudzii murume mukuru?
Nhasi wandivharira mumba mako,
Ukandibvisa umhandara zvine chisimba,
Waiti kuchema kwangu kuchemerera?
Waiti kuhwihwidza kwangu kushinyira nekuzipirwa?
Yangu mhosva ndeyeiko?
Kubhadharirwa chikoro here?
Ko, wakadii kundikumbira zvakanaka
Kana ndaikushaisa hope?
© P. Chidavaenzi, August 4, 2010.
Posted by Pastor Phil at 13:41 1 comments Links to this post
Posted by Beaven Tapureta at 17:57 0 comments Links to this post